Iintetho zemali: ILondon Heathrow ifuna abagibeli abagonyelweyo ukuba bahambe kwakhona
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Iintetho zemali: ILondon Heathrow ifuna abagibeli abagonyelweyo ukuba bahambe kwakhona
isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Julayi 26, 2021
UFRAPORT osebenza kwisikhululo senqwelomoya iFrankfurt, eAmsterdam Schiphol bayacotha, kodwa iLondon Heathrow isala phantsi. Ulawulo lweHeathrow lufuna ukuvula ixesha lokuzonwabisa kunye nohambo lokuya e-UK kubagibeli abagonyelweyo.
Isikhululo senqwelomoya saseLondon Heathrow sifuna abagibeli abagonyiweyo ukuba baphinde babhabhe kwesi sikhululo seenqwelomoya saseLondon
Inkxaso mali kaHeathrow ihlala yomelele, ngaphandle kwelahleko ekhulayo -Ilahleko ezongezelekayo ezivela kwi-COVID-19 zikhule zaya kwi- £ 2.9bn.
ILondon Heathrow Utyalomali kubuchwephesha obukhuselekileyo be-COVID-19 kunye nenkqubo yokuphumeza i-Skytrax 4 *, eyona iphumeleleyo kwisikhululo seenqwelomoya sase-UK.
Amagosa esikhululo seenqwelomoya eLondon akhankanya ukuba isikhululo seenqwelomoya siyaqhubeka nokugunyazisa ukugquma ubuso kodwa sithi I-Bhritane iyaphulukana nengeniso yokhenketho kunye norhwebo namaqabane aphambili kwezoqoqosho afana ne-EU ne-US kuba abaPhathiswa bayaqhubeka nokuthintela ukuhamba kwabagibeli abagonywe ngokupheleleyo ngaphandle kwe-UK. Iindlela zorhwebo phakathi kwe-EU ne-US ziye zafumana phantse iipesenti ezingama-50 zamanqanaba angaphambi kobhubhane ngelixa i-UK ihleli ingama-92% ezantsi.
Imfuno yabakhweli inyuka ukusuka kwimbali esezantsi, kodwa izithintelo zokuhamba zihlala zingumqobo - Bangaphantsi kwesigidi esi-4 sabantu abahamba eHeathrow kwiinyanga ezintandathu zokuqala zika-2021, inqanaba ebelinokuthatha iintsuku ezili-18 ukufikelela ku-2019. Ukubamba ukuvuseleleka kwezoqoqosho e-UK kwaye wabona uHeathrow esamkela abakhweli abambalwa ngo-2021 kunango-2020.
I-UK iyehla ngasemva njengoko abakhuphiswano baseYurophu bethatha inzuzo yezoqoqosho - Umthamo weCargo eHeathrow, elona zibuko likhulu lase-Bhritane, uhlala ungaphantsi kwe-18% kwinqanaba laphambi kobhubhane, ngelixa iFrankfurt neSchiphol zinyuke nge-9%.
Inkxaso yemali kufuneka ibekhona okoko kuthintelwe ukuhlala kuhambo -Uhambo ngoku lelona candelo lisajongana nezithintelo, kwaye okoko nje lisenza, abaPhathiswa kufuneka babonelele ngenkxaso yemali kubandakanya nokwandiswa kwesikim se-furlough scheme kunye nohlaziyo lwamaxabiso eshishini. UHeathrow uhlawula phantse i-120 yezigidi ngonyaka ngeerhafu, ngaphandle kokwenza ilahleko; urhulumente utshintsha umgaqo-nkqubo ukusithintela ekubuyiseni intlawulo engaphezulu kwaye siyakucela umngeni oku kwiNkundla ePhakamileyo.
Urhulumente wase-UK ubonakalisa ubunkokheli behlabathi kunye nokuhanjiswa kwezithuthi Isicwangciso-Siyasamkela isicwangciso-qhinga sokuhamba ngenqwelomoya saseburhulumenteni sase-UK, esibonisa ukuba ukukhula kweenqwelomoya kuyahambelana nokufezekisa ukukhutshwa kwe-zero zero ngo-2050. Sikwasamkela nesindululo sesindululo sokwanda okuqhubekayo kokusetyenziswa kwe-Sustainable Aviation Fuel (SAF); Kunye nenkqubo yozinzo lwamaxabiso e-SAF, oku kungakhuthaza ukwanda okukhulu kwimveliso ye-SAF, kudaleke imisebenzi e-UK.
Iinqwelo-moya ze-Heathrow zikhokele ekukhanyeni kwe-decarbonizing -Iindiza zeenqwelo moya zikaHeathrow sele zizinikele ekusebenziseni inqanaba eliphezulu leSAF ngowama-2030 kunakwikomiti ejongene notshintsho lwemozulu. Kutshanje sifumene ukuthunyelwa kwethu okokuqala kweSAF, ubungqina obubalulekileyo bokudibanisa i-SAF neparafini kwisikhululo seenqwelomoya esikhulu.
Umphathi we-Heathrow uJohn Holland-Kaye uthe:
“I-UK iphuma kwezona zifo zibubhubhane kwezempilo kodwa isilela ngasemva kwiintshaba zayo ze-EU kurhwebo lwamazwe aphesheya ngokungangxami ekususeni izithintelo. Ukutshintsha iimvavanyo ze-PCR kusetyenziswa uvavanyo lokuhamba emva kwexesha kunye nokuvulela abahambi abagonyiweyo base-EU nase-US ekupheleni kukaJulayi kuya kuqalisa ukubuyisela uqoqosho eBritani emhlabeni. ”
Ihotele eNtsha yaseBlossom eHouston Ivula iingcango zayo
Ulungele ukwenza itheko kwakhona: Ukuthengiswa kweChampagne kuseta entsha...
Amaxhoba Engozi Afuna Ukupheliswa Kwamandla eBoeing...
I-Brand eNtsha yase-Indonesia: Sebenza nzima, Uhlakaniphile kwaye unyanisekileyo
Iinqwelomoya ezintsha phakathi kweNewark Liberty kunye neReagan...
I-Seychelles yoKhenketho enethemba lokuQala ngokwasemzimbeni ...
Yintoni ekufuneka uyazi malunga nokufudukela eDubai